Ezigbo Ịhụnanya Anaghị Ada Ada | Igor Ochigava na Gizo Narmania
Igor: Anyị abụọ nọ n’ìgwè na-amụ ihe n’obodo Tikacheli, dị n’Abkazịa. Ọgbakọ ìgwè anyị nọ na ya dị n’obodo Jivari. Ọ dị ihe dị ka kilomita iri asatọ na ise ma e si Tikacheli gawa ya. N’ihi ya, m na-aga Jivari kwa ọnwa ka m bute akwụkwọ anyị ga-eji amụ ihe. N’afọ 1992, obere oge ọchịchị Sọviet Yuniọn dachara, obodo Abkazịa chọwara ịbụ mba nke ha. Ha achọghịzi ka ndị Jọjia na-achị ha. Ha na ndị agha Jọjia malitere ịlụ agha, ya emee ka ihe sie ezigbo ike.
Ụmụnna abụọ a rụkọrọ ọrụ ọnụ nyere ụmụnna ibe ha aka n’oge a na-alụ agha n’Abkazịa.
Gizo: E mere m baptizim mgbe m dị afọ iri abụọ na otu, otu afọ tupu agha ahụ ebido. Mgbe agha ahụ bidoro, ụjọ jidere ụmụnna anyị, ha amaghịkwa otú ha ga-esi na-ekwusa ozi ọma. Ma, Nwanna Igor, bụ́ okenye hụrụ ụmụnna ya n’anya, gbara anyị ume. Ọ gwara anyị, sị: “Ugbu a bụ oge ndị mmadụ chọrọ ka a kasie ha obi. Ihe ga-eme ka anyị na Jehova na-adị ná mma bụ ịnọgide na-ekwusa ozi ọma.” N’ihi ya, anyị ji Okwu Chineke na-ezi ndị mmadụ ozi ọma kwa ụbọchị ma na-akasi ha obi. Ma anyị na-eji akọ na-ezi ha ya.
Igor: N’ihi agha ahụ a na-alụ, anyị anaghị esizi ụzọ anyị na-esi aga eburu akwụkwọ na Jivari. Ebe ọ bụ na anọ m n’ụlọ too, achọtara m ụzọ ọzọ anyị ga na-esi aga Jivari ka a ghara ijide anyị. Anyị na-esizi n’ụzọ ndị dị n’ugwu na ebe a kụrụ ahịhịa tii aga Jivari eburu akwụkwọ. Ma, ụjọ ka na-atụ anyị n’ihi na anyị nwere ike izute ndị agha n’ụzọ ma ọ bụkwanụ zọnye ụkwụ ebe e liri bọmbụ. Ma, achọghị m ka ụmụnna ndị mụ na ha na-eso aga baa ná nsogbu, n’ihi ya, naanị m na-agazi ebute akwụkwọ kwa ọnwa. N’agbanyeghị nsogbu ndị a, Jehova nyeere m aka mụ anọgide na-aga ebute akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl. Ha mere ka okwukwe anyị sikwuo ike.
Ọ bụ eziokwu na enweghị agha a na-alụ n’obodo anyị bụ́ Tikacheli, ndị agha Jọjia ekweghị ka mmadụ pụọ ma ọ bụ bata na ya. Ma, mgbe oge oyi ruwere, nri bịara dị ụkọ n’obodo anyị, anyị echewe ihe anyị ga-eme. Ma obi tọrọ anyị ezigbo ụtọ mgbe anyị nụrụ na ụmụnna anyị nọ na Jivari atụkọtala nri ha chọrọ inye anyị.
Gizo: Otu ụbọchị, Nwanna Igor jụrụ m ma è nwere ebe anyị ga-enye ha n’ụlọ anyị a ga-edosa nri, sizie ebe ahụ na-ekesara ya ụmụnna. Ọ chọrọ ịga Jivari bute nri ụmụnna nọ ebe ahụ tụkọtaara anyị. Ma ụjọ tụwara anyị ebe anyị ma na ọ ga-agaferịrị ọtụtụ ebe ndị agha na-eche nche, o nwekwara ike izute ndị ohi n’ụzọ.​—⁠Jọn 15:⁠13.
Ma Jehova nyeere ya aka, ya agaa lọtakwa n’udo. Obi tọrọ anyị ezigbo ụtọ mgbe anyị hụrụ ya ka ọ nya ụgbọala e bujuru nri ga-ezuru anyị ruo ọtụtụ ọnwa lọta. N’oge ndị ahụ ihe siri ike, ihe ọma ụmụnna anyị meere anyị mere ka o doo anyị anya na ezigbo ịhụnanya anaghị ada ada.​—⁠1 Kọr. 13:⁠8.
E nwee ọdachi, anyị na-agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka ozugbo ozugbo. Olee otú anyị si eme ya?